Sheekh Haddii maryaha candhuufi iga duusho balse aan garan waayo meesha ay igaga dhacday, dabadeedna aan sidaasi salaadii ku tukado, candhuuftaasi ma noqonaysaa mid najaas ah oo jabinaysa salaada? | Maanta Somaliland :: Somali News
Added by Xuseen Xarbi on August 13, 2014.
Jawaab: Marka hore candhuuftu waa daahir, oo nijaas maaha. Meelkastaba ha ku dhacdo waa daahir. Waatan aynu liqayno sharaabkaynu cabayno inoo ah oo aynu jidiinkeena ku qoynayno. Marka Mushkiladaad dareentay ma jirto. Waxase mushkilad ah aqoon darada aad salaada u leedahay ee aad kala garan wayday wixi nijaas ahaa ee jabaninayay iyo wixii aan nijaas ahayn, mar se ahadaad tukanayso waa Alxamdulilaah.
Waxa se awaajib kuguaha cilmigii cibaadada na inaad qaadato oo arkaanu islaamku waxa uu ku ansaxaayod iyo wixii ay ku burayanaa labaduba inuu baryo waa waajib. Qawaacida shareecadeena waxa kamid ah shareeeco odhanaysa Maala yatimi waajib ilaa bihi Fahuwa waajib” Shayga aanu waajibku dhamaystirmaynin ilaa isaga lala yimaado isaguna waa waajib. Markaas cilmigii cibaadadu kol hadii aanay cibaadadi ansaxayn cilmigaa la’aantii Fardu cayn buu kugu yahay inaad barato. Maantana si dhib yar baad u baran karaysaa. Masjidka agtaada ka barankartaa, qofbaad la balami kartaa si dhibyar kuugu sheegay, canjalada axkaamta salaada iyo cibaadaadka k hadlaysa qaadan kartaa internetkaa agtaada kala bixi karta. Inaad adigu dhaq dhaqaaq samaysuun baa muhiim ah, taasaa markaas u baahan inaad indhaha u jeediso, Umada dhamaanteedna waa mid xil ah oo ina saaranaa.. Walaahu Aclam